Lovebọchị ịhụnanya furu efu: isi ikpeazụ nke bilogy Javier Castillo | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Thebọchị ịhụnanya furu efu
Isi mmalite Daybọchị Lovehụnanya furu efu: Apple
Ọ bụrụ na ụbọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị banyere ya akwụkwọ daybọchị isi zuru ezu, na oge a na ịkwụsị usoro ndu gị nke ị hụrụ n’akwụkwọ ndị a, anyị chọrọ ịkwu gị okwu Bọchị ịhụnanya furu efu, akụkụ nke abụọ agwụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ amaghị, na akụkọ ihe mere eme nke ndị a.
Ọ bụrụ n’ị gụọ Day You Furu Sanity ma na-echeworị ịmalite nke abụọ, ị nwere ike. Ma ọ bụrụ na ọ dọpụghị uche gị ma ị nyebeghị ya ohere, oge nwere ike ịbụ maka gị ka ị leba anya na ihe anyị kwadebere ka ị mata ihe ị ga-achọta.
1 Onye bu ode akwukwo ubochi nke furu efu
2 Kedu ihe ị ga-amata tupu ị gụọ ụbọchị ịhụnanya ahụ furu efu
3 Kedu ihe ọ bụ
4 Ihe odide sitere na Day Love Lost
5 Ọ bara uru?
Onye bu ode akwukwo ubochi nke furu efu
Dị ka akwụkwọ mbụ, Lovebọchị ịhụnanya furu efu bụ nke Javier Castillo dere. Na, mgbe o bipụtara akwụkwọ mbụ, ọ hapụrụ ohere maka akụkụ nke abụọ ma ọ bụrụ na ọ hụ na ọ ga-aga nke ọma. Ya mere, mgbe azụrụ ikike ya n'aka ya wee bipụta ya akwụkwọ nke mbụ, n'oge na-adịghị anya, akụkụ nke abụọ ọ rụpụtara pụtara.
N'ezie, ị kwesịrị ịma na Javier Castillo bụ onye ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara ego, mgbe ọ nwesịrị ihe ịga nke ọma na akwụkwọ ya, ọ hapụrụ ya ma lekwasị anya na ọrụ edemede ahụ nke nyere ya nnukwu ọganiihu.
Nke ikpeazụ n’ime akwụkwọ ndị a tọhapụrụ sitere n’afọ a, The Soul Game, nke ọ na-agbaso ụdị akụkọ ya, dị mfe ma na-atọ ụtọ (ozugbo ị ghọtara “egwuregwu” nke onye edemede dere n’etiti oge gara aga na nke ugbu a).
Kedu ihe ị ga-amata tupu ị gụọ ụbọchị ịhụnanya ahụ furu efu
Isi Iyi: Penguuin Chile
Agbanyeghi na enwere ike guo ubochi ihunanya ahu n’enweghi agu nke mbu, enwere ufodu nuances ndi furu efu ma oburu na ime ya otua. A na-emepụta ihe odide ahụ na akwụkwọ mbụ, yabụ mgbe ị gụrụ ha, ha ezughi ezu. Ugbu a, ọ bụkwa eziokwu na ihe ode akwụkwọ ji akwụkwọ a mee bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ "oyiri" (nke anyị ga-agwa gị ọzọ).
N'anya anyị, Iji ghọta 100% akwụkwọ nke Day Love Lost, ị ga-enwerịrị akụkọ ntolite site na mbụ, mara ihe mere na ihe mere akwụkwọ ahụ ji malite otú ahụ (ọ gaghị adọrọ uche gị). Na mgbakwunye, inweworị ihe ọmụma banyere ihe odide ahụ, na-enye gị ohere ilekwasị anya na nke ọhụrụ. Maraworị otú ndị ọzọ dị, yabụ ịmatakwu banyere otu àgwà ga-abụ ihe mgbaru ọsọ gị.
Ugbu a, gịnị ma ọ bụrụ na ịgụghị nke mbụ? Ọfọn, n'otu ụzọ, ọ dịghị ihe ga-eme; N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, enwere ihe ndị ị na-aghọtaghị ma ha fọrọ obere ka ha pere mpe, n’ihi na akwụkwọ abụọ ahụ yitụrụ onwe ha na, nke kachasị nghọta, ọ nwere ike mechaa bụrụ onye a ga-ahụ anya.
Maka ihe ị kwesịrị ịma, ihe kachasị mkpa bụ ihe ndị bụ isi 'kpughere' site na ibé akwụkwọ ahụ n'akwụkwọ mbụ (na nke anyị achọghị ikpughere gị) ebe ọ bụ injin mgbọrọgwụ nke akụkụ nke abụọ ahụ. Ọzọkwa ndị odide, ọkachasị Jekọb na ọkachamara FBI, abụọ kachasị mkpa. Dị ka "onye ọjọọ" na akụkọ ahụ, ọ bụ ezie na ọ ka mma ka anyị ghara ikpughe ihe ọ bụla gbasara akwụkwọ mbụ.
Thatbọchị ịhụnanya furu efu na-amalite dị ka nke bu ya ụzọ, onye gbara ọtọ na-ebu ihe na-emenye ụjọ n'aka ya. Ozugbo ọ kwụsịrị ya, ọ dị ka ọ maara karịa ndị uwe ojii, ọ bụkwa ebe ahụ ka egwuregwu ahụ ga-amalite, n'etiti oge gara aga na nke ugbu a, na-agbaso otu usoro ahụ, ịchọta Amanda, ada Steven na nwa nwanyị Jacob hụrụ n'anya. Mana nke ahụ n'oge gara aga, n'ihi na ugbu a anyị ga-enwe ihe odide ahụ na ndị ọzọ na-emekọrịta ma na-ekpughe nkọwa ọhụrụ.
Ikekwe ihe onye na-agụ ihe kachasị chọrọ ịmara bụ ihe na-eme onye ọzọ, ọ bụ ya mere onye ọ bụla gụrụ akụkụ nke mbụ ga-amalite njem a ugboro ugboro na nke abụọ a.
Ihe ohuru ichotara bu na, na akwukwo nke abuo a, isi nke obula bu aha otu n’ime ndi isi akwukwo (otutu ndi na-aguta mkpesa n’ihi na nke mbu bu ihe ojoo na onye dere ya kwuru banyere nsogbu a).
Ihe odide sitere na Day Love Lost
Ihe odide nke lovebọchị ịhụnanya furu efu Ha bụ otu ihe ahụ dị ka ụbọchị ọ tụfuru uche ya. Ma anyị na-ekwukwa banyere ihu anyị nke nwere njikọ chiri anya na nkata ahụ. Ndị a bụ:
Bowing Bowing: Ọ bụ onye nyocha FBI, ike gwụrụ ndụ ya kwa ụbọchị na nkụda mmụọ na-enwetaghị nrọ ya nke ịbụ onye omekome.
Leonard: bu onye inyeaka Bowring Bowring.
Katelyn onye ọla edo: Ọ bụ banyere nwa agbọghọ furu efu ọtụtụ afọ gara aga, otu n'ime okwu mbụ nke onye nyocha ahụ ha na-ahụghị. Ọ na-ewere ya dị ka ọdịda.
Jack: bụ nna nna Katelyn.
Onye ngosi ihe ngosi: bu onye bidoro akuko, nwanyi gba ọtọ na-asi na ya ma ihe ga eme. Ya mere, ọ na-eme onye nyocha ahụ ka ọ bụrụ onye nzuzu.
Ihe odide a nile na ndi anyi ma ama, ya mere enwere ndi ozo, ndi isi na ndi ozo, ndi ị gha aghaghi ile anya.
Echiche dị n'akụkụ nke abụọ a bụ maka ihe niile masịrị ya. E nwere ndị masịrị ya, ọkachasị n’ihi na ọ na-abanye n’ime nke ọma na nkọwa ndị tọpụrụ n’akwụkwọ mbụ; na onye na-enweghị mmasị na ya n'ihi na ọ na-agbaso otu usoro ahụ na nke mbụ wee, ya mere, 'na-efunahụ amara ya'.
N'ọnọdụ anyị, anyị nwere ike ịgwa gị:
Ọ bụrụ na njedebe nke ụbọchị ahụ Ọ kwụsịrị uche ya emeghị ka ịchọọ ịma ihe mere otu agwa, maọbụ ọ bụrụ na ịchọghị mkpa ahụ, ọ ga - aka mma ịgụ ya ma chere obere oge iji were obi ụtọ karịa ịgụ akwụkwọ a. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịmechu ihu.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịgụ akwụkwọ n’ezie, mee ya, ọ kachasị n’ihi na ị ga-achọpụta ihe mere ezinụlọ ahụ dum, na ihe ga - eme n’oge gị. Ọ bụ ezie na o yiri nke mbụ, enwere nkọwa ndị na-eme ka ị na-atụgharị peeji ndị ahụ ruo na njedebe (nke, dị ka onye edemede a niile, enweghị ike ịkọ, ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe ị nọworị na njedebe).
Yougụọla ya? Kedu ihe ị chere banyere ụbọchị ịhụnanya ahụ furu efu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Thebọchị ịhụnanya furu efu
The tulip agba egwu